Al Shabaab oo raacdo ugu jirta gacan ku dhigidda Mukhtaar Roobow “Abuu Mansuur” – SomaliaOne News Network
Al Shabaab oo raacdo ugu jirta gacan ku dhigidda Mukhtaar Roobow “Abuu Mansuur”
Jun 29, 2017 Tajuddin GUUXA 0 1525 Views By Tajuddin
Xudur, Gobolka Bakool, Soomaaliya (SOMALIAONE.NET) – Wararka ka imaanaya gobolka Bakool ayaa sheegaya in dagaalyahano katirsan Al Shabaab ay buux dhaafiyeen deegaano lagu tuhmayo in uu joogo Sheekh Mukhtaar Roobow Cali “Abuu Mansuur” oo mar ka mid ahaa hoggaanka ugu sarreeya ee kooxdaasi, balse markii dambe Khilaaf ka dhex oogmay isaga iyo Axmed Cabdi Aw Muxumed Godane oo ahaa Amiirka Al Shabaab uu sababay inuu ka fallaagoobo.
Sheekh Mukhaar Abuu Mansuur ayaa dhowaan dowladda Marekanka waxa ay ka saartay liiska shakhsiyaad si weyn ay u doonaysay ee ku jira liiska waxa loogu yeero argagaxisada, waxaana Abuu Mansuur dib looga noqday lacag malaayiin Dollar ah oo horey madaxiisa loo dul saaray.
Kooxda Al Shabaab oo ka cabsi qabta in Abuu Mansuur isku dhiibo dowladda Soomaaliya ayaa dagaalyahano badan la sheegay in ay u dirtay deegaano ka tirsan gobolka Bakool oo la tuhmayo in ay joogaan dagaalyahano ku heyb ah Abuu Mansuur halkaasna ku ilaalinaya.
Xiisad colaadeed ayaa laga dareemayaa deegaannada lagu tuhmayo in ay ku sugan yihiin maleeshiyaad beeleed hubeysan oo taageersan Abuu Mansuur iyo dagaalyahannada Al Shabaab oo raacdo ugu jira inay is hortaagaan isku day kasta oo wadaadkaasi uu iskugu dhiibi karo Dowladda Federaalka ee Soomaaliya.
Warar hoose oo soo baxaya ayaa xaqiijinaya in Abuu Mansuur wadahadallo qarsoodi ah uu kula jiro Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, waxaana suuragal ah inuu isku dhiibo ciidamada Milatariga Soomaaliya.
Maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa si weyn usoo dhoweeyay in Abuu Mansuur laga saaro Liiska dadka sida weyn loo doon-doonayo, hayeeshee Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaanu weli wax war ah ka soo saarin go’aanka Mareykanku qaattay.
Al Shabaab, Sheekh Mukhtaar Roobow Cali "Abuu Mansuur"
Dab khasaare hantiyeed geystay oo ku faafay qeybo ka mid ah Suuqa Xamarweyne Hunger threatens the lives of tens of thousands of children in Somalia
Hunger threatens the lives of tens of thousands of children in Somalia
Mogadishu, Somalia (SOMALIAONE.NET) - More than 20,000 children across nine districts in Somalia risk starving to death in a few...